Qofka aan caddeynkarin aqoonsigiisa - Migrationsverket
För dig som inte kan styrka din identitet – somaliska
Si qofka loo siiyo sharciga deggenaanshaha ee Iswiidhan wuxuu qofka codsanaya oggolaanshaha ku khasban yahay inuu caddeeyo aqoonsigiisa iyagoo ku caddeynaya baasaboor la ogolyahay ama dukumentiyo aqoonsi kale ah. Qofka aan haysan baasaboor la ogolyahay waa laga deynkaraa shuruudaa waana la siinkaraa sharicga deggenaanshaha iyadoo lagu xaqiijinayo dad ay qaroobo yihiin oo ay isdhaleen oo jooga wadanka Iswiidhan. Bogga waxaad ka akhrisankartaa warbixin dheeraad ah oo arrintan khuseysa.
Haddii aad adigu rabto inaad u soo guurto wadanka Iswiidhan oo aad dib ula kulmayso reerkaagii ama xubnaha qoyskaaga iyadoo shuruuda lagaa deynayo waa lagu siinkaraa sharciga deggenaanshaha inkastoo aanad haysan baasaboor la ogol yahay oo sax ah. Tani waxay khuseysaa oo keliya qofka aan helikarin baasaboor ama qofka ay Hey’adda laanta socdaalku u aragto in baasaboorka wadankiisa laga qaataa aanu caddaynayn aqoonsigiisa, iyo haddii aad adigu tahay:
ilmo carruur ah oo raba inuu waalidkii oo Iswiidhan jooga u yimaado
waalid raba inuu u yimaado ilmo carruur ah oo hore Iswiidhan u deggenaa
waalid raba inuu u soo guuro qof ay isqabaan oo Iswiidhan deggen qofkaas oo ay isu leeyihiin carruur ay siwadajira u dhaleen.
Shuruuda ku xiran in qofka la siiyo sharciga deggenaanshaha waxa qofka laga qaadayaa tijaabo (DNA) ah waana in baaritaanka ka soo baxay uu caddeeyo in ilmaha iyo waalidku isdhaleen
Ilmaha raba inay u soo guuraan waalidkood oo deggen Iswiidhan
Qofka ay da’diisu ka yar tahay 18 jir wuxuu codsankaraa sharciga deggenaanshaha si uu ilmahaasi ugu yimaado waalidkii dhalay oo deggen Iswiidhan kaas oo haystay sharci deggenaanshaha joogtada ah ama haysta dhalashada Iswiidhishka. U fiirso adigu keligaa ma samaynkartid arjiga codsiga. Qofka weyn oo qaangaar ah oo keliya ayaa adiga kuu samaynkara arrintaas. Arjiga sharciga deggenaanshaha waxa loo geynayaa safaarada ama qunsuliyada guud ee iswiidhishka.
Haddii waalidka Iswiidhan jooga loo oggolaadahay magangelyodoonimo oo la siiyey sharciga deggenaanshaha oo ku meelgaar ah markaa waxa khuseeya sharciyo gaar ah.
Ka akhri warbixin dheeraad ah waxa khuseeya sharciga deggenaanshaha ku meegaarka ah
Waalidiinta rabta inay u soo guuraan carruur deggen Iswiidhan
Qofka waalidka ahi wuxuu codsankaraa sharciga deggenaanshaha si uu ugu soo guuro ilmo uu isagu dhalay oo deggen Iswiidhan haddii uu ilmuhu ka yar yahay 18 jir oo uu haysto sharciga deggenaanshaha oo uu wadanka qaxooti ku yahay.
Waalidka raba inuu u soo guuro qof ay isqabaan oo deggen Iswiidhan
Haddii aad adigu tahay qof waalid ah oo raba inaad codsato sharciga deggenaanshaha adigoo u soo guuraya wadanka Iswiidhan si aad ugu timaado qof aad isqabtaan oo wadanka deggen waa in aad isu leedihiin carruur aad labadiinu siwadajira isugu dhasheen oo ay da’doodu ka yar tahay 18 sanadood. Carruurtu waa inay haystaan sharciga deggenaanshaha ama adiga kula codsanayaan sharciga deggenaanshaha markaad codsanayso. Adiga iyo qof aad isqabtaan waa in aad ahaydeen dad hore isula degggenaa meel ka baxsan wadanka Isiidhan. Suurtogal ma aha in sharciga deggenaanshaha laydin siiyo haddii guurkiinu uu bilaabmay markii uu yimi kadib qofka kale ee aad isqabtaan Iswiidhan. Qofka aad isqabtaan ee deggen Iswiidhan waa inuu haysto sharciga deggenaanshaha joogtada ah ama uu haysto dhalashada iswiidhishka.
Haddii qofka aad isqabtaan ee Iswiidhan jooga loo oggolaadahay magangelyodoonimo oo la siiyey sharciga deggenaanshaha oo ku meelgaar ah markaa waxa khuseeya sharciyo gaar ah.
Qofka aad Iswiidhan la deggenaanaysaa wuxuu ku khasban yahay inuu labadiinaba idin masruufo. Qofkaasi waa inuu isagu ama iyadu ay leeyihiin guri ay deggen yihiin oo ku filan gurigaas oo larabo inuu ahaado heerkii looga baahnaa kaas siwadajira ugu deggenaankartaan markaad Iswiidhan u soo guurto. Shuruuda masruufku ma khuseynayso haddii qofka aad u soo guuraysaa uu yahay qof da’diisu ka yar tahay 18 sanadood.
Ka akriso shuruuda masruufka iyo guriga ama deggenaanka oo ingiriisi ah (oo af ingiriis)
Tijaabada baaritaanka (DNA-ga)
Haddii marka aad sharciga deggenaanshaha codsanayo aanad caddeynkarin aqoonsigaaga adigoo tusaya baasaboor la ogolyahay, waxaad markaa u baahan tahay in lagaa qaado tijaabada DNA-ga. Macnaha tijaabada DNA-gu waxa adiga lagaa qaadayaa tijaabo candhuuf ah adigoo imanaya safaarada ama qunsuliyada guud. Xubnaha qoyskaagu (qofka aad isqabtaan, waalidka ama ilmaha deggen Iswiidhan) waxa iyagana laga qaadayaa tijaabada DNA-ga iyagoo booqanaya Hey’adda laanta socdaalka. Iyadoo la kaashanayo tijaabada DNA-ga ayaa baaritaan sugan lagu samaynayaa DNA-ga kaas oo tusi doona inaad adiga iyo xubnaha qoyskaagu aad qaraabo isu tuhiin.
Xaaladaha qaarkoo markuu qof weyni u dalbayo ilmo carruur ah oo keligiis u guuray waalidkiis oo deggen Iswiidhan, waa in oggolaasho ku saabsan in DNA laga qaado ilmaha laga helo waalidka deggen Iswiidhan kaas oo ah mid qoraal ah, oggolaanshahaa waxa lala soo xaraynayaa marka arjiga la keenayo.
Hey’adda laanta socdaalka ayaa bixinaysa kharashka ku baxaya baarintaanka DNA-ga.
Baasaboorka dadka shisheeyaha (främlingspass)
Haddii aanad haysan baasaboor waxaad u baahan tahay inaad xitaa codsato baasaboorka dadka shisheeyaha loogu talagalay waxaanad la codsanaysaa marka aad codsanayso sharciga deggenaanshaha. Waxaad ka codsanaysaa safaarada ama qunsuliyada guud marka aad geyneyso arjiga ama marka intefiyuuga lagaa qaadayo. Warbixin intaa dheer oo ku saabsan codsiga baasaboorka dadka shisheeyaha la siiyo waxaad kala xiriiraysaa safaarada ama qunsuliyada
Ka codsiga bogga internetka dadka jinsiyda soomaaliga haysta
Markay noqoto dadka jinsiyada soomaaliga haysta wadanka Iswiidhan ma aqbalayo baasaboor soomaali ah oo la sameeyey ama la dheereeyey wixii ka dambeeyey 31 bishii janaayo 1991. Hadaad tahay qof haysta jinsiyada soomaaliga waxaad ka codsankartaa bogga internetka adiga iyo carruurtaada ay da’doodu ka yar tahay 18 jir. Haddii aad leedahay carruur ay da’doodu ka weyn tahay 18 jir waxaad arjiga codsiga geyneysaa safaarada ama qunsuliyada guud.
Haddii aad codsiga sharciga deggenaanshaha ka samaynayso bogga internetka waxaad heleysaa hab aad raacdo oo ku tilmaamaya sida aad foomka u buuxinayso. Habka ku timaamaya iyo foomka codsigu waxay ku qoran yihiin luqadda iswiidhishka iyo ingiriiska. Wakhtiga arrinta wax laga qabanayaa wuu gaabanayaa haddii aad adigu codsiga ka samayso bogga internetka.
Uma baahnid inaad bogga internetka codsi kale ka samayso haddii aad hore uga codsatay safaarada ama qunsuliyada sharciga deggenaanshaha oo aan arrintaada weli go’aan laga gaarin. Markaa Hey’adda laanta socdaalku codsgia aad bogga internetka ka samaysay wey tirtirdoontaa.
Ka codsiga bogga internetka waalidiinta soomaalida ee haysta carruur da’doou ka yar tahay 18 jir ingiriisi (oo af ingiriis)
Marka codsiga laga samanayo safaarada ama qunsuliyada guud
Haddii aanad adigu buuxineynin shuruudaha bogga internetka, markaa waxaad codsiga ka samaynkartaa safaarada Iswiidhishka ama qunsuliyada guud ee ku taala wadanka aad deggen tahay. Haddii aanu wadanka aad joogtaa lahayn safaarada ama qunsuliyad iswiidhish ah, waxaad codsigaaga geyneysaa safaarada ama qunsuliyada iswiidhishka ee meesha aad deggen tahay ugu dhow.
Marka codsiga laga samaynayo safaarada ama qunsuliyada guud